FIFA oo la weydiistay inay hakiso doorashada - BBC Somali
31 Maajo 2011
Image caption Guddoomiyaha FIFA Sepp Blatter
Xiiriirrada kubbadda cagta ee England iyo Scotland ayaa ugu baaqay xiriirka kubbadda cagta adduunka ee FIFA inay dib u dhigaan doorashada guddoomiyaha FIFA oo lagu wado inay dhacdo maalinta berrito ah iyadoo uu jiro muran ku saabsan eedo musuq-maasuq oo loo soo jeediyay xiriirka kubbadda cagta adduunka.
Guddoomiyaha xilka haya ee FIFA, Sepp Blatter, ayaa u taagan doorashada iyadoo aanay jirin cid la tartamaysa maalinta Arbacada ah. Xiriirka kubbadda cagta ee Ingiriisku waxay leeyihiin waa lagama maarmaan in uu yimaad musharrax kale oo la tartama.
Baaqa Ingiriiska iyo Scotland waxaa uu soo baxay iyadoo wufuud ay ku soo ururayaan magaalada Zurich oo uu ka dhacayo shirweyne FIFA oo sanadkiiba mar la qabto. Weriye BBC halkaasi uga soo warramaya waxaa uu leeyahay waxaa jira wufuud badan oo Afrikaan ah oo taageeraya in in doorashada dib loo dhigo. Waxaa loo baahan yahay codadka 150 waddan xiriirradooda kubadda cagta si ay khasab u noqoto in doorashada dib loo dhigo.
Sepp Blatter waa uu beeniyay in wax dhibaato ah ka jirto FIFA dhexdeeda. Qaar ka mid ah sharikadaha waaweyn ee adduunka ee wax ka qaban-qaabiya tartamada kubbadda cagta ayaa walaac ka muujiyay sumcadda ciyaaraha, waxaana sharikadahaas ka mid ah: Visa, Coca Cola, Addidas iyo sharikadda diyaaradaha Emirates.